ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလေ ညစ်ပတ်မှုတွေ ပိုများလာလေပေါ့ဗျာ – Nyang Media
NDHM /ကြံခိုင်ရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်
ဒီနေ့ NLD အစိုးရဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကမောက်ကမတွေ၊ အုပ်ချုပ်မှုအစီအမံတွေ လွဲတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးရေး ခင်ဗျားတို့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ …
တစ်ချိန်က အာဏရပါတီ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် အင်အားကြီး အတိုက်အခံပါတီတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည် နေသော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပါတီ၏ နိုင်ငံရေးအမြင် အဘောထားများကို ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာ နန္ဒာလှမြင့်အား ငြမ်းမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ငြမ်းမီဒီယာ – USDP ပါတီရဲ့မူဝါဒနဲ့ နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကို ပြောပြလို့ရမလား။
တောကြောင်တွေ၊ ဟို ဘေးကနေ သူတောင်းစားတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ကနေ ထောက်ပံ့ကြေး ယူထားတဲ့ ကောင်တွေ၊ တောပြောချုံပြော၊ ဟိုအရေခြုံ ဒီအရေခြုံထားပြီး ပြောတဲ့ ဟာ တွေ လိုက်ယုံပြီး အချင်းချင်းသတ်နေလို့၊ အခု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက အများကြီး၊ ဘာသာရေးပေါ် အခြေခံ၊ …
Dr.NDHM – အဲဒါကျတော့ ပါတီရဲ့ အရေးကြီးဆောင်ရွက်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စတွေရှိတော့ မီဒီယာမှာ ကျနော်တို့ ပြောလို့မရပါဘူးခင်ဗျား။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်မယ့်ကိစ္စမှာ ‘လူထုအကျိုးပြုဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုပြင်မယ်’ လို့ USDP ပါတီက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောထားတာရှိတော့ အဲဒါ အခြေခံဥပဒေထဲက ဘယ်အချက်တွေကို ရည်ညွှန်းတာလဲ။
Dr.NDHM – အဲဒါလည်း အများကြီးပါပဲဗျ။ ကျနော်တို့ ပြင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ လွှတ်တော်မှာ ဥပဒေမူ ကြမ်းတွေ တင်ထားတာတင် (၁၀) ခုလောက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – USDP ပါတီအနေနဲ့ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားပြီလဲ။ တဆက်တည်း ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် မဟာဗျူဟာကို ဘယ်လိုချမှတ်ထားလဲ။
Dr.NDHM – အဲဒီ မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာကျတော့ ကျနော်တို့ ပါတီတိုင်းက သူ့ရဲ့အရေးကြီး ပါတီတွင်း စည်းကမ်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပြောလေ့ထုံးစံ မရှိပါဘူးခင်ဗျား။ တစ်ခုကတော့ ကျနော်တို့က နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ် တာဝန်ပေးတယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားတွေ အကျိုးအတွက်ကို ကျနော်တို့ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းရှိသရွေ့ ဖြည့်ဆည်းပြီး လုပ်သွားကြမယ်။ ဒါ ကျနော် တို့ရဲ့ ခံယူချက်ပေါ့လေ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေ ပေါ့နော်။ ဒီနေ့ ပြည်သူ တွေခံစားနေရတဲ့ ဒုက္ခတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ကျနော်တို့ကောင်းကောင်းသိတယ်။
တပ်မတော်နိုင်ငံရေးမှာ ပါခြင်း/မပါခြင်းကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပြောနေကြမယ့် အစား၊ မိမိ နိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အရှိတရားကို သေချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့မှ ပါသင့်/မပါသင့်၊ ဘယ်အထိ ပါဝင်သင့်တယ် ဆိုတာ …
နားလည်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကို ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တာဝန်ပေးလို့ အစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်လာရင် ပြည်သူလူထုအကျိုးကို အကောင်းဆုံး အလုပ်အကျွေးပြု ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကြိုးစားစီစဉ် ဆောင်ရွက်နေတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့ အနိုင်ရရှိမှုတစ်ခုကို ကျနော်တို့ရလိမ့်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အခန်းကဏ္ဍကို လျော့ချဖို့ပြောကြတာတွေရှိတယ်။ တပ်မတော် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒီလိုသဘောဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးကို တပ်မတော်ရဲ့ ထိပ်တန်း တာဝန်ရှိသူတွေ ရံဖန်ရံခါ ပြောတာတွေ့ရတယ်။ USDP ပါတီအနေနဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်မှုကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
Dr.NDHM – တပ်မတော်ဟာ ဒီနေ့နိုင်ငံရေးမှာ ပါနေတယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းကြောင်းအဖြစ် အပျက်တွေ၊ နိုင်ငံ ရေး အခင်းအကျင်းတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တာပေါ့လေ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်း၊ နောက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ၊ လက်ရှိ ပကတိ အရှိတရားပေါ့။ ကျနော် တို့နိုင်ငံမှာ လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေများပြားတာ၊ နောက် မငြိမ်းချမ်း သေး တာ၊ ဒါတွေက အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပေါ့။ နောက်တစ်ခါ အတွေ့အကြုံ၊ ဆိုတော့ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ သမိုင်း ကြောင်းကိုမူတည်ပြီး ကြည့်ရင် တပ်မတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ ဟာ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေသေး တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုကလည်း နှစ်နဲ့ချီလာပြီ။ ကျနော်တို့ ဖြတ်သန်းမှု ကာလကလည်း ဆယ်စုနှစ် ပြည့်ပြီ။
လူမျိုးစု လေးတစ်ခုကွက်ကွက်လေး၊ ဘာသာလေးတစ်ခုကွက်ကွက်လေး၊ နေရာဒေသလေးတစ်ခု ကွက်ကွက်လေးအပေါ် အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Right တစ်ခုတည်း အတွက်ကို သက်သေတွေပြနေမယ်ဆိုရင် …
ကျနော်တို့ တပ်မတော်နိုင်ငံရေးမှာ ပါခြင်း/မပါခြင်းကို စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပြောနေကြမယ့် အစား၊ မိမိ နိုင်ငံရဲ့ ပကတိ အရှိတရားကို သေချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့မှ ပါသင့်/မပါသင့်၊ ဘယ်အထိ ပါဝင်သင့်တယ် ဆိုတာကိုတော့ တာဝန်ရှိတဲ့ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေက သေချာ လေးလေး နက်နက် စဉ်းစား ပြီးတော့ မှ ဒီနိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံသားတွေ ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲဖို့၊ ဒီနိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ် မပျောက် သွားဖို့၊ ဒီ တိုင်းရင်းသား တွေရဲ့ ဓလေ့ ထုံးတမ်း တွေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့၊ အဲဒီ အနာဂတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေအနေကို အလေးပေး ပြီးတော့မှ ဒီနေ့ နိုင်ငံရေးမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်သင့်/မပါဝင်သင့် အကျိုးအပြစ်တွေကို သေချာ ချိန်ဆပြီးတော့မှ အမျိုးသား ရင်ကြား စေ့ရေး လမ်းကြောင်းအတိုင်းသေသေချာချာနဲ့ လျှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ အဖြေတစ်ခု ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပြောနေလို့ကတော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ကျတော်ထင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ဖက်ဒရယ်စနစ် တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကို လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းမှာ အားလုံးလက်ခံ ထားကြတဲ့ သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်စနစ် ဆိုတာကိုတော့ ပြောတာ သိပ် မတွေ့ရဘူး။ Centralized Federalism လား၊ Competitive Federalism လား၊ Duel Federalism လား စသဖြင့် တိတိကျကျ ခွဲခြားပြီးပြောတာ သတိပြုမိသလောက် မရှိသေးဘူး။ ဆိုတော့ USDP မှာရော ဘယ်လို ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ သွားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ မူဝါဒ တိတိ ကျကျရှိပြီလား။ ဘယ်လိုဖက်ဒရယ်စနစ်မျိုးက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သင့်တော်မယ်လို့ ယူဆပါသလဲ။
Dr.NDHM – အဓိကကတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံ၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကြီး ပြိုကွဲမသွားဖို့ဆိုတဲ့ အခြေခံနဲ့ ဆိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုကို မထိခိုက်တဲ့ ဖက်ဒရယ်မျိုးဖြစ်ရမယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာပေါ့၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ တိုင်းနဲ့ပြည် နယ်တွေရဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ကိုယ့်အစိုးရ က စုစည်းခိုင်မာအောင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အချုပ် အခြာအာဏာပေါ့။ အဲဒီ အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိခိုက်မခံတဲ့ ဖက်ဒရယ်မျိုးဖြစ် ရမယ်။ ဒါကြောင့် အားလုံး ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားတစ်ရပ်ကို ကျနော်တို့ ပါတီကလည်း ထုတ်ပြောထားပြီးသားပါ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတည်ဆောက်မယ်၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက် မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ပါတီက ပြောထားပြီးသားပါ။ အဲဒါကြောင့် ခုနကပြောတဲ့ အခြေခံအချက် (၃) ချက်အပေါ် မူတည်ပြီး တည်ဆောက်သွားရမယ်။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးရေချိန် မြင့်ဖို့လိုတယ်၊ သဘောထားတွေကြီးဖို့လိုတယ်၊ စည်းလုံးညီညွှတ်ဖို့လိုတယ်၊ အစွန်းတွေလျော့ဖို့လိုတယ်။
ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍ အားလုံးမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုက အင်မတန်ကြီးစိုးနေတယ်။ အင်မတန် ဆိုးရွားနေတယ်။ အဲဒီအကျင့်ပျက်ခြစား …
နိုင်ငံတော်အဆင့် စဉ်းစားပြီးတော့ တွေးခေါ်ယူဆနိုင်တဲ့လူတွေ လူမျိုးစု လေးတစ်ခုကွက်ကွက်လေး၊ ဘာသာလေးတစ်ခု ကွက်ကွက်လေး၊ နေရာဒေသလေးတစ်ခုကွက်ကွက်လေးအပေါ် အခြေခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Right တစ်ခုတည်း အတွက်ကို သက်သေတွေပြနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုစနစ်မျိုးပဲ အခြေတည်တည် အောင်မြင်မှာ မဟုတ် ဘူး။ ပြသနာတွေတက် နေမှာပဲလေ။ နိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့အကျိုးကို သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် ကြည့်ဖို့တော့ လိုမယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – အဲဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်က ဘယ်ဖက်ဒရယ်စနစ်အမျိုးအစားဖြစ်မလဲ။
Dr.NDHM – ကျနော်တို့ပြောပြီးသားလေ။ ဖက်ဒရယ်စနစ်တွေ အများကြီးထဲမှာမှ ခုနကပြောတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာနဲ့၊ စည်းလုံးညီညွှတ်မှုနဲ့ ပိုင်နက်နယ်မြေ မဆုံးရှုံးသွားဖို့အတွက်ကို အခြေပြု ပြီးတော့မှ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံတဲ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ တည်ဆောက်မယ် ဆိုတာ။
ငြမ်းမီဒီယာ – မေးခွန်းက ဖက်ဒရယ်စနစ် ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးထဲက ဘယ်ဖက်ဒရယ်ပုံစံကိုသုံးမှာလဲ ဆိုတာပါ။
Dr.NDHM – ကျနော်ပြောတာက ကျနော်တို့က ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုပဲ အခြေချထားမှာ။ ကျနော်တို့က ချက်ချင်း ဖက်ဒရယ် ကို ပုံစံတူလိုက်ကူးချလို့ မရဘူး။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပကတိအရှိတရားနဲ့ ရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးရေချိန်၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ နိုင်ငံရေး ရေချိန်နဲ့ အခုကျနော်တို့ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံ အပေါ် မူတည်ပြီးတော့မှ ပထမအဆင့်မှာတော့ ဖက်ဒရယ်စနစ် ကို အခြေခံမယ်။ အဲဒီအတွက် ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍတွေ ဘယ်လိုခွဲဝေကျင့်သုံးမယ်၊ ပြီးလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ ခုနက Power Sharing ၊ Resources Sharing ၊ Tax Sharing စတဲ့ ဒီ Sharing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကာလအရ ဘယ်အချိန်ရောက်ရင် Power Sharing ကိုဘယ်လောက်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမယ်၊ Resources Sharing ကို ဘယ်လောက်အထိ ဆောင်ရွက်ပေးမယ် စသဖြင့် ဖြေးဖြေးချင်း ကျနော်တို့သွားရမှာ။ ချက်ချင်းကြီး ဝုန်းဆို ခွဲချလိုက်ရင် တိုင်းပြည်အကုန် တစ်စစီဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – နိုင်ငံမှာ လက်ရှိ တရားစီရင်ရေးကဏ္ဍကို ပြောဆိုဝေဖန်ကြတာ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်။ အကယ်၍များ ဂျူရီအဖွဲ့ပုံစံနဲ့ သွားရင်ရော လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေထက် သာလွန် ကောင်းမွန်တဲ့ အနေအထားမျိုးရနိုင်သလား။
Dr.NDHM – ကျနော်ပြောချင်တာက ခင်ဗျားတို့က တရားစီရင်ရေး တစ်ခုတည်းကို ပြောနေကြတာ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍ အားလုံးမှာ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုက အင်မတန်ကြီးစိုးနေတယ်။ အင်မတန် ဆိုးရွားနေတယ်။ အဲဒီအကျင့်ပျက်ခြစား မှုကြောင့် တိုင်းပြည်က အန္တရာယ်တအားကြီးနေတယ်။ စိန်ခေါ်မှု အကြီးကြီးရှိနေတယ်၊ ကျနော်ပြောချင်တာ။ အခု မူးယစ် ဆေးဝါးကုန်သွယ်မှုတွေ၊ ရောင်းဝယ်ဖောက် ကား မှုတွေ၊ အဲဒီအပေါ်မှာ အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့အတွက် ဒီနေ့ နိုင်ငံသားတွေ၊ လူငယ်တွေ ပျက်စီးကုန်တာ အများကြီး။
တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ် အကြီးကြီး ရှိလာမယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ပြည်သူလူထုရော၊ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ အစိုးရရော …
မူးယစ်ဆေးဝါး သားကောင်တွေ ဖြစ်နေတာ။ နောင်တစ်ချိန် တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကိုဦးဆောင်မယ့် နိုင်ငံသားတွေ၊လူငယ်တွေ အများစုက ဒီလို မူးယစ်ဆေးဝါးသားကောင်တွေ ဖြစ်နေရင် သူတို့လက်ထက်ကျ ဒီနိုင်ငံကို ဘယ်လို တည်ဆောက် ကြမလဲ။ ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်။နောက်တစ်ခါ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ စားသောက်နေတဲ့ အစားအသောက်တွေ နိုင်ငံခြားကနေ မှောင်ခို သွင်းတယ်။ FDA ရှင်းလင်းချက် မရှိဘူး။ နောက် ပြည်တွင်းမှာကို အစားအသောက် အတုတွေ လုပ်တယ်။ဒါတွေကို တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တချို့မသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဝန်ထမ်းအင်အား မနိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊သိပြီးတော့လာဘ်စား ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် မသိကျိုးကျွံ ပြုနေကြတယ်။ဥပမာလမ်းဘေးစားသောက်ဆိုင် တွေပေါ့။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်တဲ့ အစားအသောက် တွေ ရောင်းနေတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်ပင် သာယာက မဖမ်းဘူး၊ မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဝန်ထမ်းနဲ့ လုပ်တဲ့လူအင်အားက မမျှဘူး။ တချို့ ကျတော့လည်း လူကြီးတွေမသိအောင် လာဘ်စားပြီးတော့ ခွင့်ပြုပေးထားတာတွေ၊ ဒါတွေကို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ သာမန် ပြည်သူတွေက နေ့စဉ် စားသောက် နေရတယ်။ အဲဒါနဲ့အဆိပ်အတောက်တွေ ဖြစ်ပြီးတော့မှ အသည်းကင်ဆာတွေ၊ အဆုတ် ကင်ဆာတွေ၊ အူမကြီး ကင်ဆာတွေ ဖြစ်ပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျနော်တို့ပြည်သူတွေ သေနေကြရတယ်။ အရက်အတုတွေ သောက်ပြီး သေနေကြရတယ်။
ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့၊ ပူတင်တို့ကို သွားဖြုတ်လိုက်ပါလား။ ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့၊ ပူတင်တို့ကို အရင်ပြုတ်အောင် လုပ်လိုက်ဦး။ ကျနော်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံသား။ တစ်အချက် ပြောရင် …
အဲဒီတော့ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်မှရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့မှာရှိသမျှ ကဏ္ဍအားလုံးက ခုနကပြောတဲ့ ဝန်ထမ်း မလောက် ငခြင်း၊ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ လူမှုစီးပွားဘ၀ အပြည့်စုံခြင်း၊ မပြည့်စုံတဲ့အတွက် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု (Corruption) ပါလာတယ်။ ပါလာတဲ့ အခါကျတော့ အဲဒီအပေါ်မှာ ခုနကပြောတဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ အခြေအနေတွေကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံက နိုင်ငံသား တွေရဲ့ အနာဂတ် ဟာ စိန်ခေါ်မှု အကြီးကြီးရှိလာတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် အန္တရာယ် အကြီးကြီး ရှိလာမယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ပြည်သူလူထုရော၊တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရော၊ အစိုးရရောက တက်ညီလက်ညီ နဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ကို သေချာစဉ်းစားပုံဖော်ပြီးတော့မှ၊ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ စည်းကမ်းတကျ လိုက်နာ ပြီးတော့မှ၊ ဥပဒေ (Rule of Law) ပေါ့ဗျာ။ ဥပဒေတည်မြဲအောင်၊ ဥပဒေအတိုင်း နိုင်ငံသားအားလုံး တပြေးညီ ပါဝင် လာနိုင်အောင် အကုန်လုံးကြိုးစား လုပ်ကြရ မှာ။ အစိုးရမှာတင် မဟုတ်ဘူး၊ ပြည်သူအားလုံး မှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်။ အားလုံး လိုက်နာကြဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့နိုင်ငံ အတွက် အန္တရာယ်အကြီးကြီး ရှိတယ်လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ လူထုကြားမှာ တဖြေးဖြေးမှေးမှိန်ပြီး တချိန်က (မ . ဆ . လ) ပါတီလို ဖြစ်သွား လိမ့်မယ် ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲ။
Dr.NDHM – အဲဒါတွေက ခင်ဗျားကိုကျနော်ပြောပြမယ်။ အတွေးအခေါ်အမြော်အမြင်မရှိတဲ့လူတွေ၊ စိတ်ဓာတ် ရေးရာညံ့ဖျင်းတဲ့ လူတွေ၊ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်စိတ်မရှိတဲ့လူတွေ ပြောနေတာ။ အဲဒါတွေကိုလိုက်ပြီး ဦးနှောက်ထဲ ထည့်ပြီး ကျနော်တို့ဖြေရှင်းနေလို့ မရဘူးလေ။ ဒီနိုင်ငံကို၊ ဒီမြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ စည်းလုံး ညီညွှတ်မှုအားနဲ့ပဲ တည်ဆောက်လို့ရမှာ။ မြန်မာနိုင်ငံသား အချင်းချင်း ကိုယ်နဲ့အမြင်မတူ ကိုယ့်ရန်သူ၊ မှိုချိုး မျှစ်ချိုး ပေါက်ကရတွေပြောနေလို့ ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံ ကျနော်တို့နိုင်ငံ ကနေ့ ပျက်စီးဖို့လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေတာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း အိုးမည်းသုတ်ပေးတာနဲ့ ဂွေးတက်အောင် ကနေကြတာ၊ ဘယ်တော့မှ ဒီတိုင်းပြည်မတိုးတက်ဘူး။ အဲဒီအသိရှိဖို့လိုတယ်။ အသိဉာဏ်ပညာရှိတဲ့ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ အဲဒီ ခင်ဗျားတို့မီဒီယာတွေကလည်း အဲဒီဘေးက ပေါက်ကရတွေ ပြောတဲ့ဟာတွေ ဦးနှောက်ထဲ ထည့်ပြီး လိုက်လုပ်နေရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့အချိန်ကုန်မယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကုန်မယ် သိလား။
ငြမ်းမီဒီယာ – ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှတလိမ့်မယ်လို့ ယူဆသလား။
Dr.NDHM – မထင်ပါဘူးဗျာ။ မထင်လို့ပဲ ကျနော်တို့ ကော်မရှင်ကို တောက်လျှောက်ပြောနေတာပေါ့။ ကော်မရှင်ဥက္ကဌရဲ့ ပြောဆို လုပ်ကိုင်မှုတွေက တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်တော့ လုံးဝမထင်ဘူး။ ဒါကြောင့် ကော်မရှင် ဥက္ကဌ ကို ကျနော်တို့ တောက်လျှောက် ဝေဖန်စောင့်ကြည့်ပြီး ထောက်ပြနေတာပေါ့။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာ လက်ရှိအာဏာရပါတီ အသာစီးရစေနိုင်တဲ့ တစ်ချိန်ကသူတို့ကိုယ်တိုင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ အမိန့်တွေ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေကို ပြန်သုံးဖို့စီစဉ်ထားတယ် ဆိုပြီးဝေဖန်ကြ တာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ (၃၀ / ၂၀၁၅) လိုဟာမျိုးပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်သလဲ။
Dr.NDHM – အာဏာရလာတော့လည်း အချိုးတွေပြောင်းကုန်တာပေါ့ဗျာ။ တကယ်ဆို ပြည်သူ့အတွက်ပဲ ဦးတည်ရမှာလေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – USDP က လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမိတ်ဖွဲ့ သဘောတူညီမှုယူ ဆောင်ရွက် သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတော့ ဘယ်ပါတီတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းမှာလဲ။ အဲဒီ တိုင်းရင်းသားပါတီ တွေကရော USDP အပေါ် ဘယ်လို သဘောထားရှိသလဲ။
Dr.NDHM – ဒါတွေကတော့ ပါတီရဲ့ အတွင်းစည်းကိစ္စတွေဆိုတော့ ကျနော်လည်း ပြောရတာခက်တယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ ပါတီတွေနဲ့ ပေါင်းမယ်/မပေါင်းဘူး ဆိုတာကလည်း တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာလည်း အများကြီးမူတည်တယ်။ သူတို့ဘယ်လို သဘောထားရှိလဲ ဆိုတာကျတော့ သူတို့ကိုမေးကြည့်မှပဲ သိလိမ့်မယ်။ ကျနော် တို့ကတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသားအကျိုးအတွက်ဆိုရင် ဘယ်ပါတီနဲ့မဆို ပူးပေါင်းပြီးတော့ လက်တွဲဆောင်ရွက် သွားမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံမူဝါဒ ချမှတ် ထားတယ်။
ငြမ်းမီဒီယာ – ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာတဲ့ လက်ရှိ ၂၀၁၉ အကုန်၊ ၂၀၂၀ အကူး နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို မဏ္ဍိုင်သုံးရပ် အခြေပြုပြီး သုံးသပ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။
Dr.NDHM – ရွေးကောက်ပွဲနီးလာလေ ညစ်ပတ်မှုတွေ ပိုများလာလေပေါ့ဗျာ။ အဲဒါပဲပေါ့။ ကျနော်တို့ကတော့ ပြည်သူ့ကံကြမ္မာ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာပေါ့ဗျာ။ ပြည်သူရဲ့ သဘောထားအမှန်အတိုင်းပဲ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက် မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ လည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားယှဉ်ပြိုင်သွားမှာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ရုံးခန်းတွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်။ NLD ကချပြရင် USDP ကလည်းချပြမယ် ဆိုတာမျိုး USDP ပါတီက ပြောထားဖူးတာလည်းရှိတယ်။ အဲဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကလည်း တတိယ အကြိ မ်ကျင်းပတော့မယ်။ အဲဒီကိစ္စကို အသိပေးချပြဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလား၊ ဘယ်တော့လောက် ဖြစ်နိုင်သလဲ။
Dr.NDHM – ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ဥပဒေနဲ့အညီ ဆောင်ရွက် ထားတာနဲ့ ပတ်သက် လို့ ကြိုက်တဲ့အချိန်လာပြီးတော့ ကျနော်တို့ဆီကိုလာပြီး လေ့လာလို့ရတယ်။ မေးလို့ရ တယ်။ အဲဒီ ဘေးကနေ လေဖမ်းဒါန်းစီး ပေါက်ကရ ပြောနေတဲ့ဟာကိုတော့ ကျနော်တို့ လိုက်ဖြေရှင်းဖို့ အချိန်မရှိပါဘူးဗျာ။ နိုင်ငံရေးအရ အောက်တန်းကျတဲ့လူတွေ ထိုးနှက်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတော့ သိပ်ပြီး ဦးနှောက်ထဲထည့် စဉ်းစားလေ့မရှိဘူးဗျ။
ငြမ်းမီဒီယာ – နိုင်ငံရေးမှာ ကျဆင်းလာတဲ့သူတွေဟာ အမျိုးသားရေးတို့၊ ဘာသာရေးတို့ကို အသုံးချလေ့ရှိကြတာ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာလည်း တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုလည်း အမျိုးသားရေးတို့၊ မဘသ တို့နဲ့ ဆက်စပ် တယ်လို့ ဝေဖန်ကြတာရှိတော့ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဟာ နိုင်ငံရေးအရ ကျဆင်းလာပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လား။
Dr.NDHM – အဲဒါဆို ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့၊ ပူတင်တို့ကို သွားဖြုတ်လိုက်ပါလား။ ဒေါ်နယ်ထရန့်တို့၊ ပူတင်တို့ကို အရင်ပြုတ်အောင် လုပ်လိုက်ဦး။ ကျနော်ပြောမယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံသား။ တစ်အချက် ပြောရင် မြန်မာနိုင်ငံသား။ အဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံသားတွေကမှ မထိန်းသိမ်း မကာကွယ် မစောင့်ရှောက်ရင် ဘယ်သူမှလာပြီး ဒီနိုင်ငံကို ကျနော်တို့ ထက်ပိုချစ်ပြီး လာတာဝန်ယူပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါ ကျနော်မြင်တာ။ နောက် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာ တွေရှိတယ်။ နိုင်ငံသားတွေ အလိုက်။ ခရစ်ယမ်၊ မွတ်ဆလင်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ။ ကျနော်တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်။
‘ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဘာဖြစ်လို့၊ ဦးနန္ဒာလှမြင့်က ဒီလိုပြောပါတယ်၊ ဒါဆို ဒီကောင်အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်’ ဒီလိုမျိုးတော့လာမပြောနဲ့။ လက် မခံဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာ …
ကျနော် တို့ ကိုးကွယ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကျနော်တို့ဘာသာဝင်တွေကမှ မထိန်းသိမ်းမစောင့်ရှောက်ရင် ဘယ်သူကမှလည်း လာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ သို့သော် ကိုယ့်ဘာသာကိုကိုယ် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့် ရှောက်ခြင်းသည် သူများဘာသာကို စော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာ။ ဟုတ်လား။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့အလုပ်ကို လာပြီးတော့မှ အမျိုးသား ရေးအစွန်းရောက်တယ်တို့၊ ဟုတ်လား။ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် တယ်တို့၊ ဟုတ်လား။ အခု ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကို ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက် ကာကွယ်နိုင်ပြီလဲ၊ ကဲ ပြော။ မြန်မာနိုင်ငံကို ခင်ဗျားတို့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်လောက် ကာကွယ်နိုင်ပြီလဲ ပြော။ ခင်ဗျားတို့ ညီညီ ညွှတ်ညွှတ် ကာကွယ်နိုင်ပြီလား။ ခင်ဗျားတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ တိုးတက်ထွန်းကား ပြန့်ပွားလာအောင် ခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်ပြီလား။ ကျနော်မေးမယ်။ ကျနော်တို့ရော လုပ်နိုင်ပြီလား။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ လုပ်နိုင်ဖို့ နေနေသာသာ အဲဒီတောကြောင်တွေ၊ ဟို ဘေးကနေ သူတောင်းစားတွေ၊ နိုင်ငံတကာ ကနေ ထောက်ပံ့ကြေး ယူထားတဲ့ ကောင်တွေ၊ တောပြော ချုံပြော၊ ဟိုအရေခြုံ ဒီအရေခြုံထားပြီး ပြောတဲ့ ဟာ တွေ လိုက်ယုံပြီး အချင်းချင်းသတ်နေလို့၊ အခု လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက အများကြီး၊ ဘာသာရေးပေါ် အခြေခံ၊ လူမျိုးရေးပေါ် အခြေခံ၊ ဒေသပေါ်အခြေခံပြီး အခု ကျနော်တို့ မြန်မာတွေ အချင်းချင်း ရန်ဖြစ် နေကြလို့ ဘယ်လောက်အချိန်တွေ ကြာပြီလဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ။ အခု မြန်မာနိုင်ငံလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ စုတ်ပြတ်သတ် နေပြီ၊ ကျနော်ပြောချင်တာ။ ပြောလိုက်ရင် ဟိုလူ့ကြောင့် ဒီလူ့ကြောင့်၊ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်းကို မညီညွှတ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ ပြသနာတွေ၊ ကျနော် ပြောချင်တာ။ ဒီနေ့ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာ လူတွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ဖို့၊ ကိုယ် ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာတွေကို ကာကွယ်ဖို့၊ အမေရိကန်လို ဒီမိုကရေစီဘိုးအေ သမ္မတနိုင်ငံကြီးကတောင်၊ အမေရိကန် သမ္မတတွေကတောင် ကြိုးစားလာပြီလေ။ အဲဒါတွေကို သွားပြီးတော့ ခင်ဗျားတို့တံဆိပ်လိုက်ကပ်နေဖို့ အအချိန်ရှိလို့လား၊ ကျနော်ပြောချင်တာ။ ခင်ဗျား ဒါ အခု ကျနော်ပြောနေတာတွေကို ခင်ဗျားအသေအချာမှတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံတော်နဲ့ နိုင်ငံသား အတွက် အကျိုးရှိ မယ်ဆိုရင် တည့်တည့် ဖြောင့်ဖြောင့်တော့ရေးနော်။ ပြီးမှ ပေါက်ကရတော့မရေးနဲ့။ ပြီးတော့ လိုရာ ဆွဲပြီးတော့ လည်း မရေးနဲ့။ ကျနော်က ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြတာ၊ ကျနော်တို့မှာ အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်တွေတို့၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကောင်းစားဖို့ပဲ စိတ်ကူးရှိတယ်။ အခု ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာ ခင်ဗျားတို့မညီညွှတ် လို့၊ အလုပ်မလုပ်ကြလို့၊ ရန်ဖြစ်နေကြလို့ မတိုးတက်တာ။ အဲဒီ သူများပေါက်ကရတွေ လာစွပ်စွဲတာကို နားယောင်နေလို့မရဘူး၊ ကျနော်ပြောတာက ဒီလိုပါ။ ကျနော်ပြောပြမယ်၊ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာလည်း မီဒီယာ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၊ NLD ပါတီလည်း NLD ပါတီ၊ အားလုံး ဟာ ဒီနိုင်ငံသားတွေဗျာ။ နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့၊ ကောင်းစားဖို့ လုပ်ကြရမှာ။ အချိန်မရှိတော့ဘူး။ ဒီထက်ဆိုးရွားတဲ့ အခြေ အနေတွေ ခင်ဗျားတို့လည်း မီဒီယာလုပ်တဲ့အတွက် ကြာရင်သိလာလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေ ဘယ်လောက်ဆိုးရွား နေတယ်၊ အန္တရာယ် ဘယ်လောက်ကြီးတယ်ဆိုတာလေ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က ရန်ဖြစ်နေဖို့ အချိန်မရတဲ့ အခါကျတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အားနည်းချက်တွေပြော၊ မင်းဘာကောင်လဲ ငါဘာကောင်လဲ၊ မင်းကဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်၊ မဟုတ်ဘူး၊ အဲဒါတွေပြောနေဖို့ အချိန်မရှိတော့ဘူး၊ ကျနော်ပြောချင်တာ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်မယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ တာဝန်ပဲ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်တယ်လို့ တံဆိပ်လာမကပ်နဲ့၊ မဆိုင်ဘူး။ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ အဲဒီတာဝန် ရှိတယ်။ ဟုတ်တယ် မလား၊ ကျနော်ပြောတာ။ ကိုယ်နေတဲ့ နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ နိုင်ငံသား တိုင်းမှာ တာဝန်ရှိ တယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ လူမျိုးတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ ကိုယ်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ဖို့ ဘာသာဝင်တိုင်းမှာ တာဝန် ရှိတယ်။ အဲဒါသည် သူများကိုစော်ကားဖို့ မဟုတ် ဘူး။ သူများနိုင်ငံကို သွားပြီးတော့ ရန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်လာထိရင် လည်း ငြိမ်ခံနေလို့မရဘူး။ ဟုတ်လား။ လာပြီးတော့။ ဒီ အခြေခံသဘောတရားတော့ နားလည်ဖို့လိုတယ်။ အဲဒါကို ‘ပြည်ခိုင်ဖြိုးက ဘာဖြစ်လို့၊ ဦးနန္ဒာလှမြင့်က ဒီလိုပြောပါတယ်၊ ဒါဆို ဒီကောင်အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်’ ဒီလိုမျိုးတော့လာမပြောနဲ့။ လက် မခံဘူး။ ကျနော်ပြောချင်တာလေ။ သဘောတရားကို ကျနော် ရှင်းပြတာပါ။
ငြမ်းမီဒီယာ – အခု NCA ပြန်စဖို့ လုပ်လာတဲ့အချိန် ရခိုင်မှာ စစ်ရေးတင်းမာမှုကလည်း မြင့်မားလာနေတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီအခြေအနေကို နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ သုံးသပ်ပြီး ဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲ။
Dr.NDHM – ဒါတွေက သာမန်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိ တယ်။ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ခြေရှုပ်မှုတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံသား၊ ရခိုင်ဆိုတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။ ကျနော်ပြောချင်တာက၊ ကချင်ဆိုတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားပဲ။ ကျနော်တို့နိုင်ငံသား တွေ အားလုံးဟာ ခုနက လူမျိုးစွဲ၊ ဘာသာစွဲ၊ ဒေသစွဲလေးတွေကို ဘေးဖယ်ပြီးတော့မှ ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ရေရှည်အကျိုးကို မျှော်တွေးပြီးတော့မှ ရေရှည်တည်တန့် ခိုင်မြဲဖို့ကို အားလုံးတက်ညီလက်ညီ ပူးပေါင်းနေတတ်ဖို့ လက်တွေ့လုပ်ကြရမှာ။ အဲဒီ နောက်ကွယ်ကနေပြီး တော့မှ၊ ဟုတ် လား၊ မျှော်ကိုးမြှောက်ပေးပြီးတော့မှ လုပ်နေလို့ တိုင်းပြည် အတွက် တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း တစ်ခုမှ မရှိဘူး။ ဒါတွေဟာ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအချက်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ ပြောရင်လည်း အရှည်ကြီးဖြစ်ကုန် လိမ့်မယ်၊ ကျနော် ပြောချင်တာက။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ၊ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အစိုးရတပ်မတော်ဆိုတာ တစ်ရပ်ပဲရှိတယ်၊ လက်နက် ကိုင် အဖွဲ့အစည်းဆိုတာ တစ်ခုပဲရှိရတယ်။ နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အစိုးရတပ်မတော်ပဲ ရှိရတယ်။ အစိုးရ တပ်မတော် တစ်ရပ်ပဲရှိတယ်။ အဲဒီအစိုးရတပ်မတော် ကို၊ ဟုတ်လား၊ ခုနကလို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊ အခုကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်၊ လက်နက်ကိုင်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရ အဆက်ဆက် က သဘောထားကြီးကြီးနဲ့၊ ဟုတ်လား၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး လမ်းကြောင်း ပေါ်သွားပြီးတော့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး စကားပြောပြီးတော့ လုပ်နေတာ။ ဒါမျိုး အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဒီလိုသွားပြီးလက်နက်ကိုင်ရင် ဟိုကလည်း သူပုန်ဆိုပြီး ချက်ချင်းအမှုန့် ကြိတ်ပစ်မှာ။ ဒီမှာတော့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ လူကြီးတွေက သဘောထားကြီးကြီး သွားနေတော့၊ ဒါကိုနားလည် ဖို့လိုတယ်။ ဒါတွေက အထိနာမှာ၊ စစ်ရေးပြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အထိနာမှာ၊ ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေ၊ ကိုယ့်နိုင်ငံသား တွေ၊ ကိုယ့် တိုင်းရင်းသားတွေပဲ ထိခိုက်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တပ်မတော် ဘက်ကလည်း ချင့်ချင့်ချိန်ချိန် စဉ်းစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ကျနော်တို့ ဒီလိုပဲ နားလည်တယ်။ လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့ ကျနော်တို့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ လက်မခံဘူး၊ ဘယ်သူမှလည်းလက်မခံဘူး၊ ကျနော်တို့လည်း လက်မခံဘူး။ အသိအမှတ်လည်း ပြုလို့မရဘူးလေ။
ငြမ်းမီဒီယာ – လက်ရှိနိုင်ငံမှာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ပြီး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် နေသူတွေကို ဖမ်းမမိတာတွေ တိုင်းကျော် ပြည်ကျော်ရှိနေပြီး ပြည်သူတွေကမချင့်မရဲ ဖြစ်နေကြရတယ်။ ဒီကိစ္စတွေအပေါ် တရားဥပဒေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်မှုကို ဘယ်လိုမြင်သလဲ။
Dr.NDHM – ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့စနစ်ကြီးကို ပြင်ကိုပြင်ရဦးမှာ။ စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေပဲ။ System ပုံစံမကျတာပေါ့ဗျ။ နောက် ဌာနတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေ၊ နောက် ခေတ်စနစ်နဲ့ညီတဲ့ ခုနက နည်းပညာအသုံးချမှုတွေ၊ နောက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေ ဒါတွေ အများကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖို့လိုတယ်။ ကျနော်တို့ ဒီနေ့သွားနေတဲ့စနစ်နဲ့က ကမ္ဘာကိုရင်ဘောင်တန်းပြီးတော့ ဒီကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် စနစ်ကို ကျနော်က ပြန်ပြီးတော့ တည်ဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲ မြင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားနည်းချက်တွေ ကတော့၊ အထွေထွေအားနည်းချက်တွေကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အများကြီးပါပဲ။ ပြောမယ်ဆိုမကုန်ပါဘူး။
ငြမ်းမီဒီယာ – စနစ်ကိုပြင်ဖို့ဆိုတော့ အခုပြောနေကြတဲ့ ပြည်ထဲ ရေးဝန်ကြီးဌာနကို အစိုးရရဲ့ လက်အောက်ကိုပို့ဖို့ ဆိုတဲ့သဘောမျိုးများလား။
Dr.NDHM – မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါတွေက နိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်တွေပါဗျာ။ ကျနော်ပြောပြမယ်၊ ဘယ်အောက် မှာပဲရှိရှိ၊ အဓိက ကတော့ ခုနကပြောတဲ့စနစ်မှန်ဖို့၊ လုပ်တဲ့လူတွေ (HR) လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေ ပြည့်စုံ နေဖို့၊ ဟိုအောက်မှာရှိခြင်း ဒီအောက် မှာရှိခြင်းနဲ့ မဆိုင်ဘူးဗျ။ ကျနော်ပြောပြမယ်၊ ပြည်ထဲရေးဆိုတာလည်း နိုင်ငံခြားက လာအုပ်ချုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော် ပြောချင်တာက။ အဓိကကိုက တပ်မတော်နဲ့ အရပ်ဖက်နဲ့ကို လာပြီးတော့ ခွဲခြားပြီးတော့ ပုံသွင်းခံထားရတဲ့ ကျနော်တို့လူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ် လွဲချော်မှု တွေပဲ။ ကျနော်ပြောချင်တာက။ တပ်မတော်သားဆိုတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသားဗျ၊ ဝန်ထမ်းဆိုတာလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား၊ ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံသား။ ကျနော်တို့ကို ဘယ်နိုင်ငံခြားသားမှ လာအုပ်ချုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်ထဲရေးဆိုတာ တပ်မတော်အောက်မှာဆိုတာ အတွေ့အကြုံအရ ဖြစ်လာ တာ၊ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အနေနဲ့ အတွေ့အကြုံကြောင့်ဖြစ်လာတာ၊ အခု ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ အရပ်သားတွေ ဘယ်လောက် နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံရှိလဲ၊ ခင်ဗျားလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံ ဘယ်သူတွေမှာရှိသေးလို့လဲ။
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အရပ်သားအောက်မှာ ထားလိုက် လို့ရှိရင် ခင်ဗျား တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ တိုင်းပြည် သူပုန်တွေထကုန်မှာပေါ့၊ ကျနော်ပြော ချင်တာ။ အုပ်စုတွေကွဲ …
ဒီနေ့ NLD အစိုးရဖြစ်လာတဲ့ အချိန် မှာ ကမောက် ကမတွေ၊ အုပ်ချုပ်မှုအစီအမံတွေ လွဲတဲ့အခါကျတော့ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ တရားဥပဒေစိုးရေး ခင်ဗျားတို့ မြင်တဲ့ အတိုင်းပဲ။ စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီး မဟုတ်ဘူးလား။ ဟုတ်တယ် မလား။ နောက်ဆုံး ဒီ တပ်မတော်ကထွက်တဲ့ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေ၊ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေကိုပဲ ဒီနေ့အစိုးရပြန်ခေါ်ပြီး ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးတွေ ခန့်ပြီးတော့၊ ဟုတ်လား၊ အခုအများစုက တပ်ကထွက်လာတဲ့ လူတွေပဲ မဟုတ်ဘူးလား၊ ကျနော်ပြော ချင်တာ။ အဓိက သမိုင်းကြောင်းအရ ဖြစ်လာ တာ။သမိုင်းကြောင်းအရ တပ်မတော်က နိုင်ငံကိုတာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့ လူတွေက ဒီ တပ်မတော်သား တွေပဲ ဖြစ်နေသေးတာကိုး။ လက်ရှိကာလမှာ။ အရပ်သားတွေက ခုမှ မုဆိုးစိုင်သင် သွားနေကြ ရသေးတာလေ။ ဒါကြောင့်၊ ဟုတ်လား၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲကာလမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးအေး ချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ ခုနက အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အောက်မှာ ဒီပြည်ထဲရေးတို့၊ ကာကွယ်ရေးတို့ ထားခဲ့တယ်ဆိုတာ ဒါကြောင့်ထားခဲ့တာ။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ဘယ်လောက်သဘောထားကြီးပြီလဲ၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ပါတီချင်းမတူရင် ပြသနာ တက်နေကြတယ်၊ လူမျိုးချင်းမတူရင် ပြသနာတက်နေကြတယ်။ အဲဒီလို နိုင်ငံရေးသဘောထား မပြည့်ဝ သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး သမားတွေကြားထဲမှာ၊ ဟုတ်လား၊ ခုနကလို လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို အရပ်သားအောက်မှာ ထားလိုက် လို့ရှိရင် ခင်ဗျား တိုင်းပြည်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ တိုင်းပြည် သူပုန်တွေထကုန်မှာပေါ့၊ ကျနော်ပြော ချင်တာ။ အုပ်စုတွေကွဲ ကုန်မှာပေါ့။ တိုင်းပြည်စုတ်ပြတ်သပ်သွားမှာပေါ့။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့က နိုင်ငံခြားသား လာအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်နိုင်ငံက အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေ၊ နိုင်ငံရေးအပြောင်း အလဲမှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ပျောက်ပျက်မသွားဖို့ ကျနော်တို့ ဒါ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့တာ။ နောင်ကျရင် ခင်ဗျားတို့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သဘောထားတွေကြီးလာတဲ့အချိန်၊ အစွဲတွေလျော့လာတဲ့အချိန်၊ အတွေ့အကြုံတွေရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင် သူ့ဟာနဲ့သူ တဖြေးဖြေးဒါတွေက ပြောင်းလဲသွားမှာ။ ချက်ချင်း ကြီး ပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ချိန်ကျရင်၊ အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် သူ့ဟာနဲ့သူ ပြောင်းလဲ လာလိမ့် မယ်။ ဒီအချိန်မှာ ခုနကလို ကိုယ်မလုပ်တတ်တိုင်း ဟိုလူ့လက်ညိုးထိုး၊ ဒီလူ့လက်ညိုးထိုး၊ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဒဘာသာ မြန်မာ လူမျိုး တွေက ခင်ဗျားလည်း ကိုယ်ညံ့ရင် ညံ့တယ်ပေါ့၊ ကိုယ် မလုပ်နိုင်ရင် မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာ သူများကို လက်ညိုးထိုး တယ် ဆိုကတည်းက အဲဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ် ကို ခင်ဗျားတို့က မြင့်မြတ်တဲ့လူရဲ့ စိတ်ဓာတ်လို့ ခေါ်လား၊ အောက်တန်း ကျတဲ့လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်လို့သတ်မှတ် သလား၊ ဒါ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မေးခွန်းထုတ်ကြည့်လိုက်လေ။ အဲဒါတွေက ကျနော်တို့တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်မဖြစ်ဘူးဗျ။
ငြမ်းမီဒီယာ – ခုနကပြောတာမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတာပါတော့၊ ဗုဒ္ဓရဲ့ အနတ္တဝါဒမှာ ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုနဲ့ လွတ်ကင်းတဲ့ အရာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာ ညွှန်ပြထားတယ်။ အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေဟာ တစ်ချိန်ကလူတွေပြုခဲ့သောအကြောင်းတရားတွေရဲ့ အကျိုးဆက် ဆိုတဲ့ကောက်ချက်မျိုးချရင် ဘယ်လိုပြောမလဲ။
Dr.NDHM – ကံဆိုတာ အလုပ်ပဲလေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘုရားဟောပြီးသား။ ကံဆိုတာ အလုပ်ဗျ။ နောက် ‘အတ္တဟိ အတ္တနော နာထော’ တဲ့၊ ကိုယ်သာလျှင်၊ မိမိကိုယ်သာလျှင် ကိုးကွယ်ရာ ယုံကြည်ရာ အစစ်အမှန် လေ။ ကျနော်ပြောချင်တာက၊ ခင်ဗျားအခု ဒီနေ့လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခု မအောင်မြင် ဘူးဆိုရင် ဟာ ဦးနန္ဒာလှမြင့် လုပ်လို့၊ ဟုတ်လား၊ ဟိုလူလုပ်လို့၊ မောင်ဖြူလုပ်လို့ ခင်ဗျား ထိုင်ဆဲနေမလား။ ကိုယ်မလုပ် လို့မဖြစ်တာကို ကိုယ်မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးသပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေကြောင့် မဖြစ်တာပဲကွာဆိုပြီး ကံကိုယုံပြီး ဆူးပုံနင်းရင် စူးရုံပဲရှိတော့မှာပေါ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန် လို့ရှိရင် ကံ ကံ၏အကျိုးကို ယုံရမယ်။ ကံဆိုတာ အလုပ်လေ။ အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်။ နောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားကိုးယုံကြည်နေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ပဲ။ ဒါပဲလေ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အနာဂတ်ကို ကိုယ်အကောင်းဆုံး ပုံဖော်။ ကျန်တာတွေကတော့ ခုနကပြောတဲ့ Cause and Effect တွေကတော့ အတိတ်က ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံနဲ့ လက်ရှိပစ္စုပ္ပန်မှာ ကိုယ်လုပ် နေတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရား ထိုက်သင့်အား လျော်စွာတော့ ပါမှာပေါ့။ အဓိကတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အလုပ်လုပ်နေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖြောင့်မတ်နေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်လေ။
Tags: ကြံ့ခိုင်ရေး, နိုင်ငံရေး, မဘသ, ရွေးကောက်ပွဲ, အမျိုးသားရေး